လူတွေရဲ့ ပြောစကား တွေက သူ့ကို သတ်နေသလို ပါပဲလို့ ဝန်ခံ လိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း #အီဗရာ - SPORTS MYANMAR
လူတွေရဲ့ ပြောစကား တွေက သူ့ကို သတ်နေသလို ပါပဲလို့ ဝန်ခံ လိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း #အီဗရာ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဘယ် နောက်ခံ ကစား သမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ပတ်ထရစ် အီဗရာ က လက်ရှိ အသင်း ရဲ့ ကျဆင်း နေမှု ကို ကြည့်ပြီး တစ်ကယ် ပဲ စိတ်ပျက် မိကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ပြိုင်ဖက် အသင်း တွေ ဖက်မှ အသင်း ဟောင်း အပေါ် လေးစား မှု တစ်စ ထက် တစ်စ ကင်းမဲ့ လာကြ ခြင်းက သူ့ကို သတ်နေ သလို ခံစား ရကြောင်း အီဗရာ က သူ့ရဲ့ ခံစားချက် တွေကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အသင်း ရဲ့ အဓိက ကစားသမား အချို့ ဒဏ်ရာ ပြသနာ မှ ပြန်လာ သက်သာ ကောင်းမွန် လာကြ မယ့် အချိန် ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ပြန်လည် တိုးတက် ကောင်းမွန် လာ လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည် ကြောင်း အီဗရာ က ဆက်လက် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် လေးစား သမှု တွေက ဘယ်မှာလဲ ? လူတွေ ကျွန်တော် တို့ကို ပြန်လည် ကြောက်ရွံ့ ကြတာ မျိုးကို ကျွန်တော် ပြန်လည် မြင်တွေ့ ချင်နေ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အသင်း က ကစားသမား တွေလည်း ကွင်းထဲ ရောက်တဲ့ အခါ ပို ကောင်းတဲ့ ကစား ပုံနဲ့ အတူ နိုင်ပွဲ တွေ ရယူ ကြတာ မျိုး ကျွန်တော် မြင်တွေ့ လိုနေ ပါတယ် ”
” ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း ဆီ သွားရောက် ရင်ဆိုင် ကစား ရဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူ မှန်း ကျွန်တော် သိ ပါတယ် ။ အဲ့တာ က ခက်ခဲ တဲ့ နေရာ တစ်ခု ပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ သေချာ အောင် ပြင်ဆင် ရ ပါ့မယ် ။ ကစားသမား တွေဟာ ကွင်းထဲ ရောက်ရှိ နေတဲ့ အချိန် ကျွန်တော် တို့တွေ ဟာ စည်းလုံး ညီညာ ( ယူနိုက်တက် ) နေကြ ရ ပါ့မယ် ”
” ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဝင့်ထည် မှု တွေကုို ကျွန်တော် ပြန်လည် မြင်တွေ့ လိုနေ ပါတယ် ။ ပြိုင်ဖက် နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား တာ မလွယ် ကူဘူး ဆိုရင် တောင် လူတွေ က ကျွန်တော် တို့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကို သိရှိ နားလည် သွားရ ပါ့မယ် ”
” ဒါ့ကြောင့် ယူနိုက်တက် ဆိုတာ ဘာမှ မဟုတ် တော့ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း လူတွေ ပြောဆို ကြတဲ့ အခါ မှာ ကျွန်တော် တစ်ကယ် ပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရ ပါတယ် ။ အဲ့တာ တွေက ကျွန်တော့် ကို သတ်နေ သလို ပါပဲ ”
” ဘယ်လို ပဲ ဖြစ်နေ ပါစေ ၊ ကျွန်တော် တို့ နိုင်ပွဲ တွေ ရရှိ နိုင်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ အသင်း မှာ လက်ရှိ အချိန် ဒဏ်ရာ ပြသနာ တွေ များစွာ ရှိနေ ပေမယ့် လည်း ကျွန်တော် နိုင်ပွဲ တွေကို မြင်တွေ့ လိုနေ ဆဲ ပါပဲ ။ ဘာပဲ ဖြစ်နေ ပါစေ ၊ ကျွန်တော် တို့ နိုင်နေ ဖို့ပဲ လိုအပ် တာပါ ”
” အချို့ လူတွေ က လက်စတာ နဲ့ ပွဲစဉ် မှာ ကျွန်တော် တို့ ကစားပုံ မကောင်းခဲ့ ကြဘူး လို့ ဝေဖန် ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ သုံးမှတ် အပြည့် ရရှိ နိုင်ခဲ့ ကြတယ် လေ ။ ကျွန်တော် တို့ သုံးမှတ် အတွက် ပဲ အဓိက ထား ကစား သွားကြ ရမှာ ပါ ”
” ကျွန်တော် တို့ ကွင်းထဲ ရောက်ပြီ ဆိုတာ နဲ့ အနိုင် ရလဒ် အတွက် ပဲ ဦးတည် ကစား ကြရ မှာပါ ။ ကျွန်တော့် ကို ယုံပါ ။ အသင်း ဟာ လူ ပြန်စုံ လာတဲ့ အခါ မှာ ကျွန်တော် တို့ တွေဟာ ပို ကောင်းတဲ့ နေစွဲ တွေကို ပိုင်ဆိုင် ကြမှာ အသေအချာ ပါပဲ ” လို့ အီဗရာ က သုံးသပ် ပြောနေ ကြ ပါတယ် ။
လူတှရေဲ့ ပွောစကား တှကေ သူ့ကို သတျနသေလို ပါပဲလို့ ဝနျခံ လိုကျတဲ့ ယူနိုကျတကျ နောကျခံလူဟောငျး #အီဗရာ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ ဘယျ နောကျခံ ကစား သမား ဟောငျး ဖွဈသူ ပတျထရဈ အီဗရာ က လကျရှိ အသငျး ရဲ့ ကဆြငျး နမှေု ကို ကွညျ့ပွီး တဈကယျ ပဲ စိတျပကျြ မိကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ပွိုငျဖကျ အသငျး တှေ ဖကျမှ အသငျး ဟောငျး အပျေါ လေးစား မှု တဈစ ထကျ တဈစ ကငျးမဲ့ လာကွ ခွငျးက သူ့ကို သတျနေ သလို ခံစား ရကွောငျး အီဗရာ က သူ့ရဲ့ ခံစားခကျြ တှကေို ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အသငျး ရဲ့ အဓိက ကစားသမား အခြို့ ဒဏျရာ ပွသနာ မှ ပွနျလာ သကျသာ ကောငျးမှနျ လာကွ မယျ့ အခြိနျ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ပွနျလညျ တိုးတကျ ကောငျးမှနျ လာ လိမျ့မယျ လို့ ယုံကွညျ ကွောငျး အီဗရာ က ဆကျလကျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး အတှကျ လေးစား သမှု တှကေ ဘယျမှာလဲ ? လူတှေ ကြှနျတျော တို့ကို ပွနျလညျ ကွောကျရှံ့ ကွတာ မြိုးကို ကြှနျတျော ပွနျလညျ မွငျတှေ့ ခငျြနေ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ အသငျး က ကစားသမား တှလေညျး ကှငျးထဲ ရောကျတဲ့ အခါ ပို ကောငျးတဲ့ ကစား ပုံနဲ့ အတူ နိုငျပှဲ တှေ ရယူ ကွတာ မြိုး ကြှနျတျော မွငျတှေ့ လိုနေ ပါတယျ ”
” ဝကျဈဟမျး အသငျး ဆီ သှားရောကျ ရငျဆိုငျ ကစား ရဖို့ ဆိုတာ မလှယျကူ မှနျး ကြှနျတျော သိ ပါတယျ ။ အဲ့တာ က ခကျခဲ တဲ့ နရော တဈခု ပါ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော တို့ သခြော အောငျ ပွငျဆငျ ရ ပါ့မယျ ။ ကစားသမား တှဟော ကှငျးထဲ ရောကျရှိ နတေဲ့ အခြိနျ ကြှနျတျော တို့တှေ ဟာ စညျးလုံး ညီညာ ( ယူနိုကျတကျ ) နကွေ ရ ပါ့မယျ ”
” ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ဝငျ့ထညျ မှု တှကေုို ကြှနျတျော ပွနျလညျ မွငျတှေ့ လိုနေ ပါတယျ ။ ပွိုငျဖကျ နဲ့ ရငျဆိုငျ ကစား တာ မလှယျ ကူဘူး ဆိုရငျ တောငျ လူတှေ က ကြှနျတျော တို့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ဖွဈတယျ ဆိုတာ ကို သိရှိ နားလညျ သှားရ ပါ့မယျ ”
” ဒါ့ကွောငျ့ ယူနိုကျတကျ ဆိုတာ ဘာမှ မဟုတျ တော့ဘူး ဆိုတဲ့ အကွောငျး လူတှေ ပွောဆို ကွတဲ့ အခါ မှာ ကြှနျတျော တဈကယျ ပဲ စိတျမကောငျး ဖွဈရ ပါတယျ ။ အဲ့တာ တှကေ ကြှနျတေျာ့ ကို သတျနေ သလို ပါပဲ ”
” ဘယျလို ပဲ ဖွဈနေ ပါစေ ၊ ကြှနျတျော တို့ နိုငျပှဲ တှေ ရရှိ နိုငျဖို့ လိုအပျ ပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ အသငျး မှာ လကျရှိ အခြိနျ ဒဏျရာ ပွသနာ တှေ မြားစှာ ရှိနေ ပမေယျ့ လညျး ကြှနျတျော နိုငျပှဲ တှကေို မွငျတှေ့ လိုနေ ဆဲ ပါပဲ ။ ဘာပဲ ဖွဈနေ ပါစေ ၊ ကြှနျတျော တို့ နိုငျနေ ဖို့ပဲ လိုအပျ တာပါ ”
” အခြို့ လူတှေ က လကျစတာ နဲ့ ပှဲစဉျ မှာ ကြှနျတျော တို့ ကစားပုံ မကောငျးခဲ့ ကွဘူး လို့ ဝဖေနျ ကွ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော တို့ သုံးမှတျ အပွညျ့ ရရှိ နိုငျခဲ့ ကွတယျ လေ ။ ကြှနျတျော တို့ သုံးမှတျ အတှကျ ပဲ အဓိက ထား ကစား သှားကွ ရမှာ ပါ ”
” ကြှနျတျော တို့ ကှငျးထဲ ရောကျပွီ ဆိုတာ နဲ့ အနိုငျ ရလဒျ အတှကျ ပဲ ဦးတညျ ကစား ကွရ မှာပါ ။ ကြှနျတေျာ့ ကို ယုံပါ ။ အသငျး ဟာ လူ ပွနျစုံ လာတဲ့ အခါ မှာ ကြှနျတျော တို့ တှဟော ပို ကောငျးတဲ့ နစှေဲ တှကေို ပိုငျဆိုငျ ကွမှာ အသအေခြာ ပါပဲ ” လို့ အီဗရာ က သုံးသပျ ပွောနေ ကွ ပါတယျ ။